Showing ४१-५० of ६५२ items.
धरान ब्लाष्ट । रंगकर्मी तथा फेसन डिजाइनर नीता थापाले ‘ब्यूटी हेरिटेज’ सञ्चालनमा ल्याएकी छन् । शुक्रवार पूर्वमन्त्री प्रभु शाह, अभिनेता नरेन खड्का, बलिउड सेलिव्रेटी फेसन डिजाइनर विशाल कपूर र वरिष्ठ व्यूटिशियन कमला श्रेष्ठले संयूक्त रुपमा ‘ब्यूटी हेरिटेज’ को रिवन काटेर उद्घाटन गरे । यसमा महिलाका लागि हेयर स्टाइलसँगै बुटिकको सुविधा उपलब्ध छ । सञ्चालिका नीताले आफू बाल्यकालदेखि नै फेसन डिजाइनर र व्यूटिशियन बन्ने चाहना रहेको बताउँदै अब ‘ब्यूटी हेरिटेज’ बाट ती इच्छा पूरा गर्न लागेको बताइन् । सेता पूलबाट मैतीदेवीतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सामुन्नेमा ‘ब्यूटी हेरिटेज’ अवस्थित
प्रकाशित मितिः असार २, २०७५
इटहरीमा एलिट सिनेमा हल उद्घाटन
इटहरी । इटहरीमा एलिट सिनेमा हल शुत्रबार उद्घाटन भएको छ । हलको उद्घाटन इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिक चौधरीले गरे । उद्घाटन गदै चौधरीले भने इटहरीका विकास चौतर्फी भईरहेको छ । ७ करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आउन लागेको सो सिनेमा हलभित्र २ वटा हल सञ्चालन हुने छन । ३ शो सिनेमा प्रदर्शन हुने र ३ सय ५२ जना दर्शक क्षमता रहेको सो हल डिजिटल प्रविधिको रहेको सञ्चालक कुबेर शर्माले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताए । चलचित्र निर्माता छविराज ओझा, चिरञ्जीवि बस्नेत, चैतन्य बराल, दिनेश पोखरेल र नायक पृथ्वीराज प्रसाईँलगायतको लगानी हल निमार्ण भएको हो । शिल्पा पोखरेल लगायतका सम्पूर्ण टिमले पत्रकार सम्मेलन गरी हल सञ्चा
तेरीयाले फिल्म खेल्ने, काेसँग गर्छिन् राेमान्स ?
चर्चित भारतीय डान्स रियालिटी शो डिअाइडी कि बिजेता तेरिया मगरले नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा डेब्यु गर्ने भएकीछिन् । डिअाइडीसंगै झलक दिखलाजाको बिजेतासमेत रहेकी तेरिया बिषेश गरी देश तथा बिदेशका कार्यक्रमहरुमा निकै व्यस्त हुँदै आएकीछिन् । यसबीचमा ‘पटुकी’ बाट फिल्म निर्माणमा प्रबेश गरेका म्याक टेन कालुले निर्माण गर्न लागेको फिल्ममा उनले काम गर्ने पक्का भएको हो । हालसम्म नाम तय नभएको उक्त फिल्ममा तेरियाले कालुका छोरा बिर्जन मिजारसंग स्क्रिन सेयर गर्ने भएकीछिन् । फिल्ममा तेरिया र बिर्जनसंगै म्याक टेन कालु, रजनी केसी, प्रमिला बिसी, बिनोद परियार लगायतको अभिनय रहनेछ । भारतमा समेत निकै राम्रो फ्यानफलोईङ भ
जय मायाप्रेम बाट सार्वधिक चर्चामा रहेको गायक धितालको अंगालोमा बाधी बोलको गीत सार्वजनिक
धरान । संघर्षमय वैदेशिक जीवन अनि त्यही जिवनसंगै जोडिएको उज्वल भबिस्य र समाजमा एक परिचयले चिनिने लक्ष्य । दैनिक जीवन सुखद पारौ त सानैदेखी परिचित बन्ने सपनाले पिरोल्छ‘ यस्ता कयौ दुखद पल,पिडादायी पलहरु र संघर्षका दिनहरु बिताएका छन गायक नारायण धिताल । आफ्नो जन्मभुमि देखी टाढा ,आफ्नो परिवारदेखी टाढा र मित्रहरू देखि टाढा रहदाको पिडा त छदैछ साथमा सानै उमेर देखि गायक बनेर आफ्नो देशको भाषा र भाकालाई सदैब गायन मार्फत चिनाउने लक्ष्य पुरा गर्न लागि परेको दुख र संघर्षका कुरा व्यक्त गर्छन गायक नारायण धिताल । यस्तै करीब ८ बर्षको अन्तरालपछि गायक नारायण धितालले आफ्नो एकल आवाजले भरिएको पछिल्लो गीति एल्बम ’जय
प्रकाशित मितिः असार १, २०७५
अायाे गुडी जाने रेल
धरान । बिसाल गौतमको स्वरमा मनछुने गीत ‘गुडी जाने रेल’ को म्युजीक भिडीयो सार्बजनिक भएको छ । शब्द तथा संगीत समेत गौतमकै रहेको गीतको भिडियोको निर्देशन भने प्रकाश धितालले गरेका हुन् । देशको सेवामा खटिएको प्रहरी जवानको कथामा बनाइएको म्युजीक भिडीयोमा जिबन भट्टाई र सम्पदा बानियाको अभिनय देख्न सकिन्छ । अप्सन मिडीयाले निर्माण गरेको भिडीयो लाई उत्सब दाहालले खिचेका हुन् भने सम्पादन निसान घिमिरेको समाबेस छ । https://www.youtube.com/watch?v=nCR7wfwnZKM&t=140s
दुई गीतको म्यूजिक भिडियो छायाङकन
पाँचथर । दुई वटा गीतको म्यूजिक भिडियोको छायाङकन हालै सम्पन्न भएको छ । लिम्बू संस्कृतिमुलक गीत ‘फक्ताङलुङ ...’ बोलको म्यूजिक भिडियोको छायाङकन गरिएको हो । राजहाङ आङबोको शब्द, दिप्सन आङबोको संगीत, दिप्सन र सुनिल केरुङको स्वर रहेको उक्त गीतको भिडियोमा सुरेश काङभा लिम्बू, एलिजा श्रेष्ठ, अञ्जु राई, रुद्र साङगे राई लगायतले अभिनय गरेका छन् । त्यस्तै दिप्सन आङबोको शब्द, संगीत र सुनिल केरुङको स्वर रहेको ‘बाँचुञ्जेल ...’ बोलको गीतको पनि म्यूजिक भिडियो छायाङकन गरिएको छ । भिडियोमा अजिशा लिम्बू, हेम गुरुङ, जोनहाङ केरुङ र शीला लाओती लगायतले अभियन गरेका छन् । पाँचथरको पर्यटकीय क्षेत्रहरु साधुटार, सिलौटि, लब
प्रकाशित मितिः जेठ २९, २०७५
कस्को दिलमा बस्दैछिन् गायिका दीपा ?(भिडियो सहित)
धरान/गायिका दीपा तामाङको नयाँ गीत ‘तिम्रो दिलमा बस्न पाउँदा’ सार्वजनिक भएको छ ।दीपाकै स्वर र संगीत रहेको गीतमा शब्द विरेन लिङ्देनले लेखेका हुन् । फडिन्द्र राईको एरेञ्ज, किशोर थापाको मिक्सिङ रहेको गीतको भिडियोमा गायिका÷संगीतकार दीपासँगै महेन्द्र राईको अभिनय रहेको छ । भिडियोको निर्देशन प्रियजन राईले गरेका छन् भने सम्पादन मनिष कार्की र छायाँकन जनकराज अधिकारीले गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः जेठ २७, २०७५
स्कटल्याण्डकी चर्चित डिजे डेक्सीले नेपाली युवायुवती नचाउने भएकी छन् । ‘सान मिगेल वेट फेष्ट २०१८’मा उनले बिभिन्न आकर्षक डिजे प्रस्तुति मार्फत नेपाली युवायुवती नचाउने भएकी हुन् । यहि शुक्रबार अर्थात २५ गतेबाट सुरु हुने ‘सान मिगेल वेट फेष्ट २०१८’ कार्यक्रम देशको १० प्रमुख शहरमा आयोजना हुनेछ । जसका लागि उनी बुधबार साँझ नेपाल आइपुगेकी छन् । यो उनको पहिलो नेपाल टुर हो । बिश्वका उत्कृष्ट डिजेहरु मध्य टप ५० भित्र डेक्सीलाई नेपाल भित्र्याउने काम मेड्ली इभेन्ट मिडिया प्रालीले गरेको हो । राष्ट्रिय तथा अन्टराष्ट्रिय प्रर्यटन प्रवद्धन गर्ने उदेश्य सहित आयोजना हुन लागेको ‘सान मिगेल वेट फेष्ट २०१८’मा नेपाल
प्रकाशित मितिः जेठ २५, २०७५
राेमान्टिक मुडमा मलिना र मनिष
मित्रता, प्रेम, द्धन्द्ध र बिछोडको समिश्रण रहेको फिल्म तिमी हुन्छौँ जहाँ जहाँको पोस्टर आउट गरिएको छ । पोस्टरमा फिल्मका मुख्य पात्रहरु मलिना श्रेष्ठ र मनिष सुन्दर श्रेष्ठ रोमाण्टिक मुडमा देखिएका छन् भने स्वरुपपुरुष ढकाल र रबि गिरी पनि अटेका छन् । फिल्ममा मलिना , मनिषसंगै स्वरूप पुरुष ढकाल, गोपाल ढकाल (छन्दे) लगायतका कलाकारहरुको मुख्य अभिनय रहेको छ । केही समय अगाडी एउटा गीत रिलिज गरिसकेको यो फिल्म पुर्णतय लभस्टोरीमा आधारित छ । बि. एण्ड बि फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यस फिल्मका निर्मातामा मदन दवाडी, हरि प्रसाद अधिकारी र डाल चन्द्र दवाडी रहेका छन् । फिल्मका कार्यकारी निर्मातामा प्रकाश बास्को
प्रकाशित मितिः जेठ २४, २०७५
किरात भूमि चलचित्र बन्ने
विराटनगर । कोशी भिजन फिल्मस् प्रालीको ब्यानरमा नेपाली कथनक चलचित्र ‘किरात भुमि’ निमार्ण हुने भएको छ । किरात राज्यको कालखण्ड र त्यसमा भएको घटनाक्रमलाई उठान गर्न किरात भूमि चलचित्र निमार्ण हुन लागेको हो । चलचित्रमा किरात राज्यको साशन व्यवस्था किरात भुमिको धर्म संस्कृती, कलासाहित्य र नेपालको सिमानाका विषयलाई चित्रण गरिने बताइएको छ । कोशी भिजन प्रालिले विराटनगरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चलचित्र निमार्ण शुभारम्भ गरेको थियो । समाजका ठुलावडाहरुले सानाहरुलाई एकआपसमा लडाएर कसरि फाइदा लिन्छन भन्ने विषयलाई चलचित्रमा समेटिएको चलचित्रका निर्देशक आकाश राईले वताए । उक्त चलचित्रमा आकाश राई, मिना मादेन